fanontaniana EMB-120 Mega Pak
4 volana 3 herinandro lasa izay #1386 by pulseox
Tiako ity fiaramanidina ity! Zavatra iray monja ihany nefa mampatahotra ahy izany! Tsy manana "Fixed seat fast" sy ny "Tsy misy fitsangatsanganana" aho rehefa miantso azy ireo aho. Ny zavatra hafa dia toa efa niorina araka ny tokony ho izy. Ny soso-kevitra rehetra dia ho ankasitrahana. Misaotra!
Fotoana mamorona pejy: 0.219 segondra